IHuawei Y6 Pro 2019: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa okusemthethweni | Zonke iinkonzo ze-intanethi
IHuawei Y6 Pro 2019: Imodeli entsha efikelelekayo
Kwezi veki zidlulileyo, iHuawei iye yandisa uluhlu lwayo oluphantsi. Sele besishiyile naye Y7 Pro 2019 kunye naye Y5 Lite kwiiveki ezimbalwa zexesha. Uphawu lwaseTshayina ngoku lubonisa i-smartphone yalo entsha kolu luhlu lokungena. Kule meko, umenzi usishiya neHuawei Y6 Pro 2019. Ngokwendlela yoyilo, babheja kwinto yangoku kakhulu nenotshi yayo emile njengokuhla kwamanzi.
Ukucaciswa kwale Huawei Y6 Pro 2019 kuthobekile, kuqhelekile kuluhlu lwayo, kodwa akukubi konke konke. Ukongeza, uphawu lwaseTshayina lusishiye nezinto ezimbalwa ezimangazayo ngale smartphone. Lo nto Qiniseka ukuba uyayazi indlela yokuvelisa inzala Phakathi kwabathengi Yintoni esinokuyilindela kule fowuni?
Le smartphone ijolise kubaphulaphuli abancinci, njengoko kuye kwenzeka ukwazi. Mhlawumbi eyona nto yothusayo esiyifumanayo ngasemva kwayo. Kuba yifowuni ebhejayo ngasemva kunye nokugqitywa kwesikhumba. Eyona nto ngokuqinisekileyo iyinika uyilo olungaqhelekanga, kodwa yenye yezona zinomdla.
1 Iinkcukacha zeHuawei Y6 Pro 2019
Iinkcukacha zeHuawei Y6 Pro 2019
Ngaphandle kokufikelela kolu luhlu luthobekileyo lophawu lwesiTshayina, siyabona ukuba iifowuni ezingaphakathi kwazo zenza inkqubela phambili ebonakalayo. Le Huawei Y6 Pro 2019 ikushiya unemvakalelo elungileyo. Inikwa njenge-smartphone elungileyo ngexabiso eliphantsi, elinokuqhuba kakuhle kwimarike. Oku kukucaciswa kwayo ngokupheleleyo:
I-Huawey Y6 Pro 2019 iinkcukacha zobugcisa
Umzekelo Y6 Pro 2019
Inkqubo yokusebenza Ipie ye-Android 9.0 ene-EMUI 9
Isikrini I-6.09-intshi ye-LCD ene-HD + isisombululo se-1.520 × 720 pixels
i-ram 3 GB
Ukugcinwa kwangaphakathi I-32 GB (Iyandiswa ngekhadi le-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-512 GB)
Ikhamera esemva I-13 MP nge-f / 1.8 aperture kunye ne-LED Flash
Ikhamera yangaphambili MP engama-8 ene-f / 2.2 ukuvula
Conectividad I-SIM ezimbini zeBluetooth 4.1 LTE / 4G WiFi 802.112.4 GHz
Ezinye izinto Ukuvula ubuso
Ibhetri 3.000 mah
Kukho iinkcukacha ezithile zefowuni esingakhange sikwazi okwangoku, nangona kungafanelekanga ukuba zithathe ixesha elide ukuba zibe semthethweni. Sijongene nesixhobo esifikelela kwinqanaba lokungena elithembisa ukuhambisa. U-Huawei wayefuna ukuthatha umngcipheko ngolu luyilo, nge buyele emva kokugqitywa kwesikhumba. Abasebenzisi baya kuba nakho ukukhetha phakathi komdaka nomnyama xa kuziwa kwimibala.
Eminye, i-Huawei Y6 Pro 2019 ijoyina izikrini ezinkulu, kunye nescreen esingaphezulu kweesentimitha ezi-6. Iikhamera zelensi enye kwicala ngalinye lefowuni. Eyona nto itsale umdla kukuba esi sixhobo asinaso isivamvo somnwe. Nangona ukubuyisela, sifumana ukwamkelwa kobuso. Le yinto esele ikwazile ukuyibona kwiimodeli ezisezantsi ezisezantsi kwi-2018, kwaye kubonakala ngathi ibambe kulo nyaka.
Kwikhamera engaphambili yale Huawei Y6 Pro 2019 a Umsebenzi weflashie weSelfie 2.0 ngawo ukhanyise imizobo yakho ngokwakho. Olu hlobo lwemisebenzi luyenza icace into yokuba isixhobo senzelwe abaphulaphuli abancinci. Kwiprosesa yefowuni asikabinayo idatha okwangoku.
Okwangoku, Sifumana kuphela ukumiselwa okukodwa kwale modeli, kunye ne-3 GB ye-RAM kunye ne-32 GB yokugcina kwangaphakathi. Le nguqulo yeHuawei Y6 Pro 2019 sele ithengiswa kwiimarike zaseAsia. Okwangoku kubonakala ngathi kuya kuthengwa kuphela kwiwebhusayithi yohlobo lwesiTshayina. Nangona kulindeleke ukuba oku kufumaneka kuya kwandiswa. Akukho nto iyaziwayo malunga nokusungulwa kwesixhobo samazwe aphesheya. Nangona kulindeleke ukuba ibe nakho ukuthenga eYurophu.
Kwixabiso lale Huawei Y6 Pro 2019 nathi asinayo idatha. Ubuncinci hayi ngalo mzuzu, kuba kufuneka zifike kungekudala. Kodwa kuya kufuneka silinde uphawu ngokwalo ukuba lusinike ulwazi malunga nalo. Siza kuqaphela ulwazi olutsha malunga nefowuni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » IHuawei Y6 Pro 2019: Imodeli entsha efikelelekayo
Faka iPie ye-Android kwi-Asus ZenFone 5Z: uhlaziyo luqala ukufika kwihlabathi liphela
Ukubaleka kuthethwe ngekati eyaziwayo yeorenji eGarfield Rush